BORIBORINTANY I : ATAONTSIKA FILAMATRA HOY ME HANITRA – MyDago.com aime Madagascar
BORIBORINTANY I : ATAONTSIKA FILAMATRA HOY ME HANITRA
Ho tohin’ny asa fitsinjovana ireo zokiolona teny Ampatsakana nataon’ny kandida solombavambahoaka Me Hanitra Razafimanantsoa natolotry ny movansa Ravalomanana eny amin’ny boriborintany voalohany dia androany Talata 10 desambra dia nisy nitohy izany asa fitsinjovana ireo zokiolona izany. Fanomezana vary, siramamy, savony ho an’ireo zokiolona mahatratra 300 eny amin’ny 67Ha sy ny manodidina no natao tamin’izany ka teny amin’ny kianja fanaovana basikety 67Ha afovoany no nanatontosana ny hetsika. Nambaran’ny Me Hanitra tamin’ny fandraisam-pitenenana nataony fa fotoanan’ny fampielezankevitra izao ary fotoana ahafahana mifampiresaka sy mifanatritava. Faly aho hoy Me Hanitra mahita anareo eto, ary faly isika rehetra satria atsy ho atsy dia hiova ny fiainantsika, horovitintsika ny pejy. Dada Ravalomanana hoy izy no nahatonga an’i Me Hanitra ho kandida, dikan’izany dia any amin’i Dada ny lakile. Afaka fotoana fohy dia hivadika ny tantara, ho adinontsika any ny namotika ny firenena. Maro amintsika no voafitaka, nampanantenaina volabe ianareo. Fantatsika hoy Me Hanitra fa fahoriana no nentin’izao fitondrana izao nandritra ny dimy taona. Nihafy isika ary notsipazana lakrimozena, maro no mary, maro no tsy nanana vola hitsaboana. Izao isika hoy izy afaka miteny, hifidy isika amin’ny 20 Desambra, tsy ny vavatsika no miteny, tsy hihafihafy isika amin’io hifidy ny dokotera Robinson, sy Me Hanitra. Tsy hary izahay hoy Me Hanitra raha tsy teo ianareo zokiolona ary raha tsy mahazo ny tso-dranonareo izaahy dia tsy tafavoaka. Fantatsika hoy izy fa anisan’ireo 109 voasazin’ny sehatra iraisam-pirenena ny mpifaninana amin’ny dokotera Robinson. Fantatsika ihany koa fa minisitry ny vola izy izay anisan’ny niray tsikombakomba tamin’ny fanodikodinambola. Novidiana ny safidintsika. Ny fanafody dia mifidy ny dokotera hanasitrana ny fery, hanarina ny rava. Zavadehibe ihany koa hoy Me Hanitra dia ny fifidianana depiote. Ny antony dia rehefa lany dokotera dia manana fandaharanasa ho tanterahana. Hifidy solombavambahoaka isika satria ao amin’ny Antenimieram-pirenena izay maro an’isa no mifidy ny Praiminisitra. Ny zanak’I dada dia miezaka ho maro an’isa ary vinavinan’I dokotera Robinson dia Praiminisitra I Neny. Tsy vita izany raha tsy miaraka amin’ny depioten’ny boriborintany voalohany Me Hanitra. Handrotsaka vato isika hoy izy ho an’I Me Hanitra. Nambarany ihany koa fa rehefa nitety fokontany 44 ny tenako dia nahita fa niaina tao anatin’ny loto sy haizina ny mponina. Rehefa azontsika ny fahefana dia ataontsika filamatra ny boriborintany voalohany. Nanome toky ny tenany fa na vita aza ny fifidianana dia hitsidika ny mponina izy. Miara misalahy isika hoy izy ary alohan’ny fahataperan’ny fepotoana maha solombavambahoaka ny tenako dia ahita ny dian-tànako ety amin’ny boriborintany voalohany ianareo. Tamin’io fotoana io ihany koa no nanomezan’ireo zokiolona tso-drano ny kandida depiote boriborintany I ny Me Hanitra Razafimanantsoa hahaleo hahalasana amin’ny fifidianana depiote.
KANDIDA HANITRA RAZAFIMANANTSOA : ATAO MITOVY TANTANA NY BORIBORINTANY I
KANDIDA HANITRA RAZAFIMANANTSOA : NIJERY IFOTONY NY OLAN’’NY MPONINA TENY AMIN NY FARITRA VITSIVITSY TAO AMIN’ NY BORIBORINTANY I
ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : VONONA HITONDRA AVO NY FANEVA
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 décembre 2013 Catégories Politique
8 réflexions sur « BORIBORINTANY I : ATAONTSIKA FILAMATRA HOY ME HANITRA »
10 décembre 2013 à 16 h 50 min
@ Me Hanitra: ahoana ity mpifanandrina iray eto @ 1er arrondis ity
10 décembre 2013 à 18 h 22 min
Hanitra dia BE saina lavitra , dia lavitra noho indry sy ilay DJ mozatra malalanao réééé!!!!!!!!!
tena tsy misy ahotranao mitsy ry denise malalako o! tsy foiko TENA ZAY VAO TSAPAKO FA ZANAKA FOZA MARINA IANAO,tohizo aky piso a!
12 décembre 2013 à 8 h 46 min
Mamafa tahak’izao no tokony nataonareo ry MyDago, isaky ny manoratr’ato io Denise io !
Dia avoaka tahak’izao koa ny adiresiny !
Manjary lany andro aminy fotsiny ny mpisera, ary tsy afaka mifampidinika amin’ny zavatra mahakasika ny hoavin’ny firenena !
13 décembre 2013 à 9 h 00 min
Tsara angamba raha somary manao recupération kely isika taorian’iny teny amin’ny Carlton iny satria ankoatra ny resaka momba ny fahamamoana dia vohizin’ireo Fery vao ireo indray izao ny momba ny Franc maçonnerie. Ny mpomba azy rehetra izao dia mamafy hevitra hoe tsy Malagasy io ka inona no ifidianana io. Izany no milaza fa mbola betsaka ny ezaka tokony ataontsika. Mirary soa
13 décembre 2013 à 9 h 02 min
Hajanony any ny resaka Denise fa tsy mitondra mankaiza akory.
nous disons simplement « touche pas à mon pote » !!!
Précédent Article précédent : Hommage à Mandela : Les Drapeaux Malgaches en berne et le president transistion dance !
Suivant Article suivant : ZANAKA AMPIELEZANA TULEAR MONINA ETO ANTANANARIVO : HANOHANA NY DR ROBINSON SY ME HANITRA